Amazon Prime Day yakasimbiswa kwaJune 21 na22 | Ndinobva mac
Amazon Prime Day yakasimbiswa muna Chikumi 21 uye 22
02-06-2021 Amazon 'Prime Day' muna Chikumi 21 na11, 2021
Hupfumi CATALONIA SPAIN EUROPE BARCELONA Makambani
Izvi zvinogona pasina mubvunzo kuve chimwe chezviitiko zvinotarisirwa nevashandisi vane Prime account muAmazon online chitoro. Zviripachena kuti gore rega rega izvo zvavakapihwa vanovandudza uye kune zvakawanda uye zvigadzirwa zvakawanda mumazuva maviri ekutenga aya.
Pane dzakawanda zviitiko zvatakaona kunyangwe zvimwe zvigadzirwa zveApple zvakadzikiswa pamitengo inonakidza panguva ino, asi pamusoro pezvose zvatinoona iri hombe katarogu yezvigadzirwa izvo zvinobvumidza vashandisi kuchengetedza mari chero bedzi vaine iyo Prime account.
Amazon Prime Day muna Chikumi 21 uye 22 neanopfuura mamirioni maviri zvinopihwa
Sezvo vachizivisa zviri pamutemo chiitiko ichi chichava chaJune 21 na22, mazuva ano anowirirana neMuvhuro neChipiri apo mamirioni evashandisi munyika medu vatove nemubhadharo wakakura wakaiswa uyo unowanzosvika musi wa15 wemwedzi uno. Iyo inguva chaiyo mukutenga chigadzirwa chakadzikiswa nemushandisi uye mune iyi kesi kune kutaura kweanopfuura mamirioni maviri zvinopihwa uye zvidzikiso.
Jamil Ghani, mutevedzeri wemutungamiri weAmazon Prime akatsanangurira vezvenhau kuti gore rino izvo zvinopihwa zvichakwira zvakanyanya uye ndizvozvo havasati vambopa zvigadzirwa zvakawandisa zvakadaro, tichaona kuti chigadzirwa chii.
Zviripachena kuti mazuva maviri aya kune zvakare "zvisina basa" zvigadzirwa kana izvo zvigadzirwa izvo zvisina munhu anotenga, asi hei, zvizhinji zvezvigadzirwa zvinova zvinonakidza zvinopihwa. Kuti ukwanise kunakidzwa neiyi mvumo zvinongodiwa chete kuti uve nekunyoresa kwePrime inoshanda kuti ugone kusarudza kushandisa mazuva makumi matatu mahara kana usipo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Amazon Prime Day yakasimbiswa muna Chikumi 21 uye 22
Itsva yekushandisa pamagedhi: homeOS inogona kuratidzwa paWWDC
macOS 12 inogona kunzi "Mamut" kana "Monterrey"